StoreKeeper | Asia Beverages Co., Ltd. ﻿
25.6.2019, Full time , Manufacturing
•	အကျင့် စာရိတ္တကောင်းမွန်ပြီးအသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာနေရာ ဒေသတွင်နေထိုင်သူများကိုဦးစားပေးမည်။
•	ဘွဲ့ရ (သို့) အဝေးသင်တက်ရောက်နေသူဖြစ်ရမည်။
•	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံအနည်းဆုံး ၁ နှစ်အထက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။
•	Computer MS Office အသုံးပြုနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location No.10,Oak Kyin Station Street, 16 Quarter,Hlaing Township,Yangon.
Job posted: 25/6/2019
162 Days, Full time , Manufacturing
169 Days, Full time , Manufacturing
StoreKeeper Logistics & Supply Chain Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Asia Beverages Co., Ltd. Logistics & Supply Chain Jobs Logistics & Supply Chain Jobs StoreKeeper Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Work in Yangon (Rangoon)(8822)
Mandalay Region 132 Days
Shan State 170 Days